Uphando kwintengiso yepakethi yencwadana yekhompyuter
ngu admin nge-20-05-26
Imakethi yeLaptop bag ifundwe ngokubanzi ngababhali bengxelo kugxilwe kakhulu kubathengisi bendawo, ukwanda komda, amacandelo akhokelayo, iindlela ezikhulayo kunye namathuba aphambili, kunye nezinye izifundo ezibalulekileyo. Ingxelo iveza izinto ezinamandla zenza ...
"Ukuhamba" kunentsingiselo eyahlukileyo
Wonke umntu, "ukuhamba" kunentsingiselo eyahlukileyo. Kubantwana abangakhathaliyo, abahambayo banokutya isidlo sasemini esimnandi umama ehleli ngaphandle nothando, kwaye banokudlala ngolonwabo nabahlobo, yeyona nto imnandi kakhulu. Kubo, intsingiselo yokuhamba kunokuba "ukudlala" kunye "nokutya"! F ...
Ungagcinwa njani ukhuselekile xa uthenga ukutya
Njengengcali yokutya, ndeva imibuzo emininzi ebantwini malunga nemingcipheko yekoronavirus kwiivenkile zokutya kunye nendlela yokuhlala ikhuselekile ngelixa uyokuthenga ukutya phakathi kwesi sifo. Nazi iimpendulo kwimibuzo exhaphakileyo. Into oyichukumisayo kwiishelufa zegrocery ayixhalabisi kangako kunokuba ngubani ophefumlayo ...